Antihistamine ho an'ny fanahy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-01 mpandimby ny Magazine > Antihistamine ho an'ny fanahy
Ny iray amin'ireo traikefa mampatahotra indrindra teo amin'ny fiainako dia ny fikarakarana cockatiels na budgie an'ny namana 34 taona lasa izay. Mbola tsy feno taona ny zanakay vavimatoa tamin’izany. Na dia efa taona maro lasa izay aza dia tsapako ho toy ny omaly ihany. Niditra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aho ary nipetraka tamim-pifaliana teo amin'ny tany izy ary nivonto ny tarehy ka sahala amin'ny sarivongana Bouddha kely. Betsaka ny olona atahorana ny ainy raha mihinana sakafo sasany na voatsindron’ny bibikely. Mety harary mafy ny olona sasany rehefa mihinana pizza na misotro ronono omby. Ny hafa dia tsy maintsy miala amin'ny vokatra varimbazaha rehetra, na dia sakafo fototra aza ny mofo. Ny varimbazaha dia zava-dehibe hatrany amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny biby. Tena zava-dehibe tokoa ny niantsoan’i Jesosy ny tenany ho mofon’aina. (Ity fanoharana momba ny mofo ity dia azo amin’ny fotoana rehetra.) Na izany aza, io sakafo foto-tsakafo io dia mety ho loharanon’ny fangirifiriana ho an’ny olona sasany ary mety hampidi-doza ny ainy mihitsy aza. Na izany aza, misy allergy mampidi-doza lavitra izay mety tsy ho fantatsika.
Efa tsikaritrareo hoe ahoana ny fihetsiky ny kristiana sasany amin'ny "asan'Andriamanitra"? Hita fa somary tery ny aretiny ara-tsaina, ao anaty ny hatsiaka ny atidohany ary tara ny eritreritra rehetra. Ny antony an'ity fanehoan-kevitra ity dia ho an'ny kristiana maro dia tapitra teo amin'ny hazo fijaliana ny fiainan'i Jesosy. Ny ratsy kokoa aza dia tsapan'izy ireo fa ny fotoana nahaterahan'i Jesosy sy ny fahafatesan'i Jesosy dia fombafomba fanao amin'ny fifanekena taloha sy amin'ny fotoanan'ny lalàna. Nefa ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy ny farany ihany fa ny fiandohana fotsiny! Io no fiovana teo amin'ny asany. Izany no mahatonga ny fandrotsahantsika amin'ny fahafatesan'i Jesosy, ilay
miaina amin'ny batisa isika fa tsy ny fiafarany fa ilay fiovana eo amin'ny fiainantsika! Ny mpitarika sy mpampianatra kristiana sasany dia nahatsapa io olana io izay olona maro - toy ny fiara ao anaty fotaka - mijanona eo amin'ny famonjena azy ireo ary tsy mitohy amin'ny fiainany intsony ny fiainany. Manaraka hevitra vitsivitsy momba ny fiainana miaraka amin'i Kristy izy ireo. Ny fiainana dia mihena amin'ny fanompoana amin'ny mozikan'ny filazantsara sy ny famakiana ireo boky kristiana. Rehefa tapitra ny androm-piainan'izy ireo - noheverin'izy ireo - mandeha any an-danitra izy ireo, nefa tsy fantatr'izy ireo izay hataony any. Azafady, aza diso hevitra aho: tsy manan-javatra mifanohitra amin'ny mozikan'ny filazantsara, ny famakiana boky kristiana na amin'ny ankapobeny hanoherana ny fiankohofana sy ny fiderana. Saingy tsy ny farany ny famonjena ho antsika, fa eo am-piandohana izany - na dia ho an'Andriamanitra aza. Eny, fiandoham-piainana vaovao ho antsika ary ho an'Andriamanitra no fiandohan'ny fifandraisana vaovao miaraka amintsika!
Nanana faniriana lehibe i Thomas F. Torrance hahalalany hoe iza Andriamanitra. Mety ho noho ny fahalianany amin'ny siansa sy ny fankasitrahany lehibe an'ireo razantsika nanorina izany. Nandritra ny fikarohana nataony dia nahitana ny fitarihan'ny dualisme mpanompo sampy tamin'ny fampianarana ny Fiangonana sy ny fahatakarantsika an'Andriamanitra. Ny toetran'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra dia tsy azo sarahina. Tahaka ny hazavana, izay mitrandraka ary mihetsika amin'ny fotoana iray, Andriamanitra dia misy lafiny telo. Isaky ny antsoinay Andriamanitra hoe "ianao" dia mijoro ho vavolombelona amin'ny toetrany isika ary isaky ny milaza isika fa fitiavana Andriamanitra dia mijoro ho vavolombelona amin'ny zavatra nataony isika.
Mahaliana fa ny siansa voajanahary dia nanaporofo fa ny hazavana fotsy madio dia avy amin'ny fitambarana tonga lafatra amin'ny hazavana mena, maitso madio ary manga madio. Mitambatra ao anaty hazavana fotsy ireo telo ireo. Vao mainka aza: ny siansa koa dia nahita sy nanaporofo fa ny hafainganam-pandehan'ny hazavana dia tsy miovaova azo antoka eo amin'izao rehetra izao. Ny asan'i Athanasius, raim-piangonana avy amin'ny 4. Century, niafara tamin’ny Konsilin’i Nicée sy ny famolavolana ny Fahalalana ny Finoana Nicée. Athanasius dia nanohitra ny fampianarana manjaka momba ny Arianisma, dia ny fiheverana fa i Jesosy dia zavaboary izay tsy Andriamanitra foana. Ny Fanekem-pinoana Nicée dia mbola fanekem-pinoana fototra sy mampiray ny Kristianisma nandritra ny 1700 taona lasa.
Fifanarahana sy fifanarahana
Taorian'ny Thomas rahalahiny, nanazava i James B. Torrance ny fahatakarantsika ny firaisankina rehefa nanazava ny tsy fitovian'ny fifanarahana sy ny fifanarahana iray izy. Mampalahelo fa ny fandikana latinina ny Baiboly, izay nanan-kery kokoa teo amin'ny fampianarana amin'ny Fiangonana fa tsy ny fandikana ny King James Bible, dia niteraka olana tamin'io lohahevitra io rehefa nampiasa ny teny latinina ho an'ny fifanarahana. Misy fepetra sasantsasany ny fifanarahana ary hotanterahina ny fifanarahana raha toa ka efa notanterahina ny fepetra rehetra.
Tsy misy fepetra manokana anefa ny fifanekena. Manana adidy sasany anefa izy. Ny olona rehetra manambady dia mahafantatra fa tsy mitovy intsony ny fiainana aorian'ny fanambadiana. Vato fehizoron'ny fanekempihavanana ny fandraisana anjara sy ny fandraisana anjara. Ny fifanekena dia afaka mirakitra ny fanapahan-kevitra tokana, fa ny fifanekena dia mila fanoloran-tena avy amin'ny andaniny sy ny ankilany mba hahatanteraka izany. Toy izany koa ny fanekena vaovao izay nisy tamin’ny alalan’ny ran’i Jesosy. Raha miara-maty aminy isika, dia hatsangana amin’ny maty miaraka aminy ho olom-baovao. Vao mainka aza: Ireo olona vaovao ireo dia niakatra tany an-danitra niaraka tamin’i Jesosy ary niara-nipetraka taminy teo ankavanan’Andriamanitra (Efesiana). 2,6; Kolosiana 3,1). Nahoana? Ho tombontsoantsika? Tsia tsy marina. Ny soa ho antsika tsirairay dia miankina amin’ny drafitr’Andriamanitra hampiraisana ny zavaboary rehetra aminy. (Mety hiteraka allergy hafa izany. Moa ve aho milaza ny universalisme? Tsia, azo antoka fa tsy izany. Fa tantara iray hafa izany.) Tsy misy na inona na inona azontsika atao hanehoana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny famonjena. farany fa ny fiandohana. Manantitrantitra izany i Paoly ao amin’ny Efesianina, ankoatra ny toerana hafa 2,8-10. Ny zavatra rehetra nataontsika talohan’ny famonjena antsika, na tamin’ny fahatsiarovan-tena na tamin’ny tsy fahatsiarovan-tena, dia nahatonga ny filàna ny fahasoavan’Andriamanitra tsy mendrika akory. Fa rehefa nandray izany fahasoavana izany isika ka tonga anisan’ny nahaterahan’i Jesosy, ny fiainany, ny fampijaliana ary ny fahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana, dia anisan’ny fitsanganany tamin’ny maty koa, dia ny fiainam-baovao ao anatiny sy miaraka aminy.
Tsy afaka hijoro fotsiny intsony isika izao. Ny fanahy dia manosika antsika handray anjara amin'ny asan'i Jesosy mba hahatanteraka ny "tetik'asany" ho an'ny olombelona. Io no porofo velona nahatonga ny nofo ho nofo - ny fahatongavan'Andriamanitra nofo tao amin'i Jesosy - fa tsy manasa antsika fotsiny Andriamanitra, fa maniry fatratra Izy hiara-hiasa aminy ety ambonin'ny tany. Indraindray io dia mety ho asa mafy ary tsy manakana ny fanenjehana olona sy vondrona maharitra izany. Ny allergie dia mitranga rehefa tsy fantatry ny vatana intsony izay tsara sy azo ekena ary inona no manimba ka tsy maintsy iadiana.
Soa ihany, mety ho haingana sy mahomby ny fitsaboana. Tsy tadidiko ny nataonay raha toa ny balaonina ny zanako vavy. Na inona na inona izany dia namelona azy haingana sy
dia tsy nisy fiatraikany. Nahaliana fa tsy nahatsikaritra ny zava-niseho taminy izy. Manome toky antsika ny Baiboly fa tena Andriamanitra dia mifandray lalina amin'ny fiainantsika, na dia tsy tsikaritray aza izany. Raha avelany hamirapiratra eo amin'ny fiainantsika ny hazavana fotsy, dia miova tampoka ny zava-drehetra ary tsy ho toy ny taloha isika.
Famoronana an'i Nicea
Mino an Andriamanitra tokana, ny Ray, ny Tsitoha, izay nahary ny zavatra rehetra, ny lanitra sy ny tany, ny tontolo hita maso sy ny tsy hita. Mino an'i Jesosy Kristy Tompo tokana isika, Zanaka lahitokan'Andriamanitra, nateraky ny Ray talohan'ny andro: Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana sy fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'ny Andriamanitra marina, nateraka, tsy natao, iray Izay ao amin'ny Ray; tamin'ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Ho antsika olombelona ary ho famonjena antsika dia avy any an-danitra Izy, tonga nofo tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina avy tamin'i Maria Virjiny ka tonga olombelona. Nohomboana tamin'ny hazo fijaliana Izy ho antsika teo ambanin'i Poncio Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niakatra tany an-danitra. Mipetraka eo ankavanan'ny Ray Izy ary ho avy amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty; tsy hisy farany ny fanapahany. Mino ny Fanahy Masina isika, izay Tompo sy manome fiainana, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay notompoina sy nomem-boninahitra niaraka tamin'ny Ray sy ny Zanaka, izay niresaka tamin'ny alàlan'ny mpaminany sy ilay masina, katolika sy apôstôlika. Fiangonana. Ekentsika ny batisan'ny famelana ny helontsika. Miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainan'izao tontolo izao ho avy isika.